DISKI IKE DISK (HDD), IHE Ị GA-EME? - DISK - 2019
Mgbe arụ ọrụ kọmputa na-adaba, ọtụtụ ndị ọrụ na-ege ntị na nhazi na vidiyo vidiyo. Ka ọ dị ugbu a, diski ike nwere mmetụta dị ukwuu na ọsọ nke PC, m ga-ekwukwa na ọ dị ịrịba ama.
Ọtụtụ mgbe, onye ọrụ ahụ na-achọpụta na diski ike bụ braking (nke a na-akpọ ya dị ka ederede HDD) site na ọkụ nke na-acha ọkụ ma anaghị apụ (ma ọ bụ na-egbukepụkarị), mgbe ọrụ a rụrụ na kọmpụta ma ọ bụ na ọ na-agba ọsọ ruo ogologo oge. Mgbe ụfọdụ, diski ike nwere ike ime ka ụbụrụ na-adịghị mma: okuku, ịkụ aka, ịcha. Ihe a nile na-egosi na PC na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na draịvụ ike, na ọnụ ọgụgụ na arụmọrụ na mgbaàmà niile dị n'elu gụnyere HDD.
N'isiokwu a, m ga-achọ ịnọ na ihe ndị kachasị ewu ewu nke diski ike na-ada ngwa ngwa na otu esi edozie ha. Ikekwe anyị na-amalite ...
1. Nhicha na ntanetị, nzigharị, nchọpụta nje
2. Lelee uru disk na Victoria na ihe ọjọọ
3. Ọnọdụ HDD nke ọrụ - PIO / DMA
4. HDD okpomọkụ - esi belata
5. Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na HDD nwere ike ịgba, kụrụ aka, wdg.
Ihe mbụ ị ga-eme mgbe kọmputa malitere ịkụda mmụọ bụ iji kpochapụ diski nke faịlụ ndị na-enweghị isi na nke na-adịghị mkpa, na-eme ka HDD ghara ịchọta, lelee ya maka njehie. Ka anyi leba anya n'ihe omuma nke o bula.
Ị nwere ike ikpochapụ disk nke faịlụ junk n'ụzọ dịgasị iche iche (e nwere ọbụna ọtụtụ narị ihe ndị dị mkpa, nke kacha mma n'ime ha ka m mepụtara na nke a post:
N'akụkụ a nke isiokwu ahụ, anyị na-atụle usoro nhicha ahụ n'ebughị ịwụnye ngwanrọ nke atọ (Windows 7/8 OS):
- buru ụzọ gaa nchịkwa nchịkwa;
- wee gaa na ngalaba "usoro na nchekwa";
- Mgbe ahụ na mpaghara "Nchịkwa", họrọ ọrụ "Wepụ ohere disk";
- na windo a na-ahụpụta, họrọ nanị usoro diski nke osyere (site na ndabara, C: / drive). Soro ntuziaka na Windows.
2. Debe nkpọ diski
Enwere m ike iji ojiji nke atọ ndị ọzọ na-eme ihe dị mma nghọta (banyere ya na nkọwa zuru ezu n'isiokwu gbasara nhicha ma wepu ihe mkpofu, ịmepe Windows:
Enwere ike ime ihe nkwekọrịta site na isi ihe. Iji mee nke a, gaa na nchịkwa Windows n 'ụzọ ahụ:
Ogwe njikwa na System na Nche & Ngwaọrụ Nlekọta Ihe nke Na-achọpụta Mgbagwoju Ike
Na windo nke mepee, ị nwere ike ịhọrọ akụkụ disk chọrọ ma bulie ya (njedebe).
3. Lelee HDD maka njehie
A ga-atụle ụzọ ịchọta disk na ihi ụra n'okpuru ebe a, ma lee ruo mgbe anyị ga-emetụ na njehie ezi uche. Iji lelee ndị a, usoro scandisk ahụ wuru na Windows ga-ezu.
Ị nwere ike ịgba ọsọ a na ọtụtụ ụzọ.
1. Site n'usoro iwu:
- na-agbaso akara iwu ahụ n'okpuru onye nchịkwa ma tinye iwu "CHKDSK" (na-enweghị utu aha);
- gaa na "kọmputa m" (ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, site na menu "mmalite"), wee pịa nri disk ahụ chọrọ, gaa na njirimara ya, ma họrọ akara diski maka njehie na taabụ "ọrụ" (lee nseta ihuenyo n'okpuru) .
Kedu mgbe m ga-achọ ịlele disk maka ihe ọjọọ? Na-emekarị, a na-elebara anya mgbe nsogbu ndị a ga - apụta: ogologo oge na - edegharị ozi site ma ọ bụ na diski ike, ịgbagha ma ọ bụ na - egwu (karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ tupu), na - egbuke egbuke nke PC mgbe ịnweta HDD, nhụsịrị faịlụ, wdg. Ihe mgbaàmà ndị a enweghị ike ịbụ ihe ọ bụla Ọ pụtaghị, yabụ ịsị na diski adịghị adị ogologo ndụ. Iji mee nke a, ha na-eji ihe omume Victoria mee nchọpụta na diski ike (enwere ihe analogues, mana Victoria bụ otu n'ime usoro kachasị mma).
Ọ gaghị ekwe omume ikwu okwu ole na ole (tupu anyị amalite ịlele "Victoria" disk) ajọ nsogbu. Site n'ụzọ, nkwụsị nke diski ike nwekwara ike jikọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị blocks.
Kedu ihe bụ njedebe ọjọọ? A sụgharịrị n'asụsụ Bekee. ihe ojoo bu ihe ojoo ojoo, ihe di otua enweghi ike ime. Ha nwere ike ịpụta maka ihe dịgasị iche iche: dịka ọmụmaatụ, mgbe diski ike na-ama jijiji, ma ọ bụ mgbe ọ kụrụ. Mgbe ụfọdụ, ọbụna na diski ọhụrụ enwere ihe ọjọọ ndị pụtara mgbe ị na-eme disk. N'ikpeazụ, ihe dị otú ahụ dị na ọtụtụ disks, ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ha adịghị, mgbe ahụ usoro faịlụ n'onwe ya na - enwe ike ịnagide - a na - ekewapụrịrị ihe dị otú ahụ na - enweghị ihe ọ bụla edere na ha. Ka oge na-aga, ọnụ ọgụgụ nke ihe ọjọọ ahụ na-aba ụba, mana ọtụtụ mgbe site n'oge ahụ diski ike aghọghị ihe a na-apụghị izere ezere n'ihi ihe ndị ọzọ karịa ka ihe ọjọọ ga-enwe oge iji mee ka "nsogbu" dị egwu.
Ị nwere ike ịmatakwu banyere Victoria ebe a (ibudata, site na ụzọ):
Kedu esi lelee diski ahụ?
1. Gbaa Victoria n'okpuru onye nchịkwa (dịka pịa nri EXE na-arụ ọrụ nke usoro ihe omume ma họrọ nkedo site n'aka onye nlekọta n'okpuru menu).
2. Na-esote, gaa ngalaba TEST ma pịa bọtịnụ START.
Ụdị nke agba dị iche iche kwesịrị ịmalite ịpụta. Mkpụrụ ọkụ ahụ na-edozi, nke ka mma. A ghaara ugwo ugwo uhie na-acha anụnụ anụnụ - ihe a na-akpọ ihe ndina.
A ga-akwụ ụgwọ nlezianya anya na bọl na-acha anụnụ anụnụ - ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ n'ime ha, nlele ọzọ nke diski na-arụ ọrụ nhọrọ REMAP. Site n'enyemaka nke nhọrọ a, a na-eweghachi disk ahụ na-arụ ọrụ, na mgbe ụfọdụ, diski mgbe usoro dị otú a nwere ike ịrụ ọrụ karịa oge ọzọ HDD!
Ọ bụrụ na ị nwere diski ike ọhụrụ na e nwere ogwe anụnụ anụnụ n'elu ya - ị nwere ike iwe ya n'okpuru akwụkwọ ikike. Na-acha anụnụ anụnụ ọhụụ ọhụrụ ọ bụghị ndị a na-agbanwe agbanwe na-enweghị ike ime!
Mgbe ụfọdụ, n'ihi njehie dị iche iche, Windows na-agbanwe mode diski ike site na DMA ka ọnọdụ PIO oge ochie (nke a bụ nnọọ ihe dị mkpa nke diski ike nwere ike ịmalite, ọ bụ ezie na nke a na-eme na kọmpụta ochie).
Maka ama aka:
PIO bụ ngwaọrụ eji eme ihe ngwa ngwa, mgbe arụ ọrụ nke kọmputa na-arụ ọrụ.
DMA bụ usoro nke ngwaọrụ nke ha na-emekọrịta ihe na RAM, nke ga-eme ka ọsọ nke ọrụ dị elu site n'usoro nke ịdị ukwuu.
Kedu otu esi chọpụta ebe PIO / DMA dị na diski ahụ na-arụ ọrụ?
Naanị gaa na njikwa ngwaọrụ, wee họrọ ntinye akara IDE ATA / ATAPI, wee họrọ channelụ IDE mbụ (nke abụọ) wee gaa na ntọala dị elu.
Ọ bụrụ na ntọala ga-akọwa ọnọdụ nke HDD dịka PIO, ịkwesịrị ịnyefee ya na DMA. Esi mee nke a?
1. Ụzọ kachasị mfe ma kachasị mfe bụ ihichapụ ọwa IDE isi na nke abụọ na njikwa ngwaọrụ ma malitegharịa PC (mgbe ị wepụsịrị ụzọ mbụ, Windows ga-enye redatagharịa kọmputa ahụ, zaa "ọhụụ" ruo mgbe a ga-ehichapụ ọwa niile). Mgbe nhichapụ, malitegharia PC, mgbe ịmalitegharia, Windows ga-ahọrọ usoro kachasị mma maka ọrụ (o yikarịrị ka ọ ga-alaghachi n'ọnọdụ DMA ma ọ bụrụ na enweghị mmejọ).
2. Mgbe ụfọdụ, ikuku siri ike na CD Rom jikọtara na teepu IDE ahụ. Onye na-elekọta IDE nwere ike itinye diski ike na ọnọdụ PIO na njikọ a. Edozi nsogbu ahụ n'ụzọ dị mfe: jikọọ ngwaọrụ iche iche, site n'ịzụta eriri USB ọzọ.
Maka ndị ọrụ novice. Eji eriri abụọ jikọọ na diski ike: otu bụ ike, onye nke ọzọ bụ ụdị IDE dị otú ahụ (iji gbanwee ozi na HDD). USB IDE bụ waya "dịtụsịrị" (ị nwekwara ike ịhụ na otu vein bụ ọbara uhie - akụkụ a nke waya ga-adị n'akụkụ nke ike waya). Mgbe ị mepee usoro ihe omume ahụ, ị ​​ga-ahụ ma ọ bụrụ na ejikọtaghị njikọ nke cable IDE na ngwaọrụ ọ bụla karịa disk diski. Ọ bụrụ na e nwere - mgbe ahụ kpochapụ ya site na ngwaọrụ yiri ya (egbula na HDD) ma gbanye PC.
3. A na-atụ aro ka ịlele na melite ndị ọkwọ ụgbọala maka motherboard. Ejila aka mee ihe. mmemme ndị na-elele ngwaọrụ PC niile maka mmelite:
Mmiri kachasị mma maka disk diski bụ 30-45 grams. Celsius Mgbe okpomọkụ na-aghọ ihe karịrị ogo 45 - ọ dị mkpa ime ihe iji belata ya (ọ bụ ezie na site n'ahụmahụ m nwere ike ikwu na okpomọkụ nke 50-55 degrees Celsius adịghị mkpa maka ọtụtụ disks na ha na-arụ ọrụ dị jụụ dị ka 45, ọ bụ ezie na ndụ ha na-ebelata).
Tụlee ọtụtụ ewu ewu metụtara HDD okpomọkụ.
1. Olee otú iji tụọ / chọpụta ọnọdụ okpomọkụ nke draịvụ ike ahụ?
Ụzọ kachasị mfe bụ ịwụnye ụfọdụ ọrụ na-egosi ọtụtụ nha na njirimara nke PC. Dịka ọmụmaatụ: Evereset, Aida, Wizard Wizard, wdg.
Maka nkọwa zuru ezu gbasara ụlọ ọrụ ndị a:
AIDA64. Nhazi processor na diski ike.
Site n'ụzọ, a pụrụ ịchọta diski ike na Bios, ọ bụ ezie na ọ dịghị adaba (Malitegharia kọmputa n'oge ọ bụla).
2. Olee otú iji belata okpomọkụ?
2.1 Ihichapu unit site n'ájá
Ọ bụrụ na ị kpochasịghị ájá sitere na sistemụ ahụ ruo ogologo oge, nke a nwere ike imetụta okpomọkụ, ọ bụghị naanị diski ike. A na-atụ aro ka ị na-emekarị (ihe dị ka otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'afọ iji kpochapụ). Otu esi eme nke a - lee isiokwu a:
2.2 Ịwụnye ngwa nju oyi
Ọ bụrụ na nhicha dị ọcha adịghị enyere aka iji dozie nsogbu ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta ma wụnye onye nlekota ihe ọzọ nke ga-afụ na disk diski. Usoro a nwere ike belata oge okpomọkụ.
Site n'ụzọ, n'oge okpomọkụ, mgbe ụfọdụ, oke okpomọkụ dị na mpụga window - na diski ike na-ekpo ọkụ n'elu okpomọkụ a tụrụ aro. Ị nwere ike ime ihe ndị a: mepee mkpuchi nke usoro usoro ihe a ma debe onye nkịtị na-aga n'ihu n'ihu ya.
2.3 Ịfefe diski ike
Ọ bụrụ na ị nwere 2 draịva ike arụnyere (na a na-ebukarị ha n'osisi ma na-eguzo n'akụkụ n'akụkụ ibe ya) - ị nwere ike ịnwa igbasa ha. Ma obu n'ozuzu, wepu otu diski ma jiri otu. Ọ bụrụ na ị na-ewepụ otu n'ime nkesa 2 dị nso - ọnụ ọgụgụ dị na okpomọkụ site na 5-10 ogo na-ekwe nkwa ...
2.4 Ntughari ederede idebe ederede
Maka laptọọpụ, a na-enweta ihe dị mma maka azụmahịa. Nkwụsị dị mma nwere ike ibelata okpomọkụ site na 5-7 ogo.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na elu nke laptọọpụ ahụ na-eguzo kwesịrị ịbụ: dị larịị, siri ike, akọrọ. Ụfọdụ ndị na-achọ itinye laptọọpụ ahụ na sofa ma ọ bụ ihe ndina - ya mere a ga-egbochi ọnụ ụzọ ikuku ventilata na ngwaọrụ ahụ ga-amalite ikpuchi!
N'ikpeazụ, diski ike nwere ike ịmepụta ọtụtụ ụda na-arụ ọrụ, ihe ndị kachasịsị bụ: ịgba egwu, ịgbawa, na-akụ aka ... Ọ bụrụ na disk dị ọhụrụ ma na-akpa àgwà otú a site na mmalite - o yikarịrị ka ụda olu a na "kwesịrị" ịbụ.
* Nke bụ eziokwu bụ na diski ike bụ ngwaọrụ ngwaọrụ ma na-arụ ọrụ ọ ga-ekwe omume ịgbawa na igwe - isi disk na-esi n'otu mpaghara gaa na onye ọzọ n'ogologo ọsọ: ha na-eme ụda dị otú ahụ. N'eziokwu, ụdị diski dị iche iche nwere ike ịrụ ọrụ na ọkwa dị iche iche nke cod.
Ọ bụ ihe ọzọ - ọ bụrụ na diski "ochie" ahụ malitere ịkụ ụda, nke na-emetụbeghị ụdị ụda ahụ. Nke a bụ ihe njirimara dị njọ - ịkwesịrị ịnwale ngwa ngwa o kwere mee iji detuo data niile dị mkpa na ya. Naanị mgbe ahụ ịmalite ịnwale ya (dịka ọmụmaatụ, ihe omume Victoria, lee n'elu na isiokwu ahụ).
Kedu otu esi belata ụda mkpọtụ?
(enyere aka ma ọ bụrụ na diski dị mma)
1. Tinye akwa roba na ebe mgbakwunye nke diski (ndụmọdụ a bara uru maka PC, ọ gaghị ekwe omume iji gbanwee nke a na laptọọpụ n'ihi ọkwa ya). Enwere ike ime ihe ndị dị otú ahụ n'onwe gị, nanị ihe a chọrọ bụ na ha ekwesịghị ịdị oke ma gbochie mmerụ ahụ.
2. Belata ọsọ nke isi na-eji ngwaọrụ pụrụ iche. Ogo nke ịrụ ọrụ na disk ahụ, n'ezie, ga-ebelata, mana ị gaghị achọpụta ihe dị iche na "anya" (ma na "ntị" ọdịiche ga-adị ịrịba ama!). The diski ga-agba ọsọ ntakịrị nwayọọ, ma ọ ga-abụ na a gaghị anụ ihe ọ bụla, ma ọ bụ ụda olu ya ga-ebelata site n'usoro nke ịdị ukwuu. Site n'ụzọ, ọrụ a na-enye gị ohere ịgbatị ndụ disk ahụ.
More banyere otu esi eme nke a n'isiokwu a:
Nke ahụ bụ maka taa. M ga-enwe nnọọ ekele maka ndụmọdụ bara uru banyere ibelata okpomọkụ nke diski na cod ...